कमेडी च्याम्पियनका हिमेष पन्तलाई कसले दियो ज्या न मार्ने ध म्की ? खबपु र दले दाईलाई खोले बेलिबिस्तार (भिडियो हेर्नुस) – Bishal4You
कमेडी च्याम्पियनका हिमेष पन्तलाई कसले दियो ज्या न मार्ने ध म्की ? खबपु र दले दाईलाई खोले बेलिबिस्तार (भिडियो हेर्नुस)
Bishal4You ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १८:२७
नेपालकै पहिलो कमेडी रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनका उपाधि दावेदारका रुपमा हेरिएका मध्ये एक हुन् हिमेश पन्त । गत माघ १३ गते प्रशारित १६ औं एपिसोडमा हिमेशले ‘अन्धविश्वासी वैज्ञानिक’को रुपमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
सो कमेडीले उनी बिवादमा पनि तानिए । उक्त स्ट्यान्डअप कमेडीमा उनले बोलेको एउटा डाइलगले सीता माताको अ’पमान गरेको भनेर आपत्ति जनाइएको हो । हिमेशले वैज्ञानिकहरुले पनि धर्ममा विश्वास राख्ने कुरालाई लिएर उनले व्यंग्य गरेका थिए । ‘म खत्रै वैज्ञानिक हुँ, पढेको पढ्यै गर्छु । अघि भर्खर ४ अध्याय स्वस्थानी पढेर आएको हुँ । स्वस्थानीमा लेखेको रहेछ भगवान गणेश मुसामाथि चढे । एक त मोटो गणेश त्यसमाथि हात्तीको टाउको छ ।
मुसामाथि किन अत्याचार गर्ने ? मेरो बाउ शिव भएको भए म भन्दिन्थेँ, बुवा म पनि अब साँढे चढ्छु । मुसामाथि चढ्ने होइन नि यार । बरु बिरालोमाथि चढ्दा हुन्छ । जैले बाटो काटेको काट्यै गर्छ ।’ हिमेष पन्तको यहिँ कमेडीले उनलाई टप ३ मा पुर्याउने सफल बनाएको थियो । तर यसपछि उनि विवादमा मात्रै तानिएनन् उनलाई ज्या’न नै लिने ध म् की सम्म आएको बताए । यस बिषयमा उनिसंग गरिएको कुअराकानी भिडियोमा हेर्नुस्-